Ahoana ny fametrahana mora ny fanamboarana novaina | Androidsis
Ahoana ny fametrahana ny fanarenana voaova mora foana amin'ny terminal Android maro
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, Fampiharana Android, Tutorials
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasehoko anao ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra misy hametrahana ny Fanarenana voaova amin'ny terminal Android isan-karazany, tsy mila manana solosaina manokana eo am-pelatanantsika akory ny rehetra ary tsy mila mampiasa fampiharana maimaimpoana fotsiny an'ny Play Store de Google.
Antsoina ny fampiharana amin'ny fanontaniana RecoverX ary avy eo manazava ny fomba fiasa sy ny terminal rehetra izay ananantsika izahay.
Alohan'ny ahafahanao mampiasa RecoverX afaka manazava vaovao Fanarenana voaova izay ahafahanao manao zavatra manan-danja toy ny kopia voafafa ao amin'ny rafitra miasa manontolo na mametaka romana nandrahoina dia tokony ho fantatrao izany mila miorim-paka ny terminal anao.
Para Root ny maodelin'ny terminal anao manokana dia mila mampiasa ny motera fikarohana ianao Androidsis na tsy mahomby fa ny Fikarohana Google raha te hahita tutorial afaka mifanaraka amin'ny maodelinao Android.
Mikasika ny fomba fampandehanana ilay rindranasa, dia tsotra toy ny nametraka azy io indray mandeha Fahazoan-dàlana ho an'ny Superuser, kitiho ny bokotra tokana izay ho hitanao ao amin'ilay rindrambaiko fampiharana, avy eo mifantina amin'ny lisitra iray ny modely marina an'ny fitaovana android anao, safidio ny kilasy fanarenana ary tsindrio farany amin'ny fametrahana.
Ireto misy sarin'ilay fizotrany ao amin'ireto sary manaraka ireto:
Ahoana ny fahitanao ny fametrahana famerenana fanarenana vaovao dia tsy mora velively toy ny fampiasana ity fampiharana maimaimpoana manaitra ity. Izaho dia nanandrana izany LG G2 maodely iraisam-pirenena D802 ary fahombiazana io.
Lisitry ny maodely mifanaraka amin'ity rohy ity.
Fanazavana fanampiny - UnlockRoot, fitaovana hanongotra fitaovana marobe
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fametrahana ny fanarenana voaova mora foana amin'ny terminal Android maro
Kath dia hoy izy:
Izy io dia miasa amin'ny naoty n7000?
Valio amin'i Kath
Izany ve, nametraka azy aho nefa tsy nanadihady ny lisitry ny maodely mifanaraka amin'izany, ary tsy mivoaka ilay naoty n7000. Ary mora kokoa amin'ny RecoveryX izany noho ireo tutorial fanarenana hafa novaina tao. : / Tsy azoko atao ve ny mametraka maodely hafa ao amin'ilay faritra «Fidio ny fitaovanao?
Alfred dia hoy izy:
Aiza no ahitako rohy fampidinana hametrahana ny fanarenana voaova?
Mamaly an'i Alfredo
Val dia hoy izy:
Ahoana no ampidirako ny rindranasa raha toa ka tsy manana Play Store ny fitaovana Blu Dash JR-ko? Misaotra anao
Mamaly an'i val
Kefas dia hoy izy:
Salama, tsy afaka mamaka Xperia j aho, efa nanao izany tamin'ny UnlockRoot Pro, saingy ankehitriny tsy azo miorim-paka intsony, ny kinova Xperia dia 4.1.2, ST26a, ary ny programa root explorer dia tsy afaka miasa raha tsy misy azy. . faka …… Inona no tokony hataoko?
Mamaly an'i Kefas
Fifandraisana amin'ny tsoratadidy miaraka amin'i Gmail manomboka anio